Norway: Qofkii labaad oo xalay u geeriyooday Corona-Virus. - NorSom News
Norway: Qofkii labaad oo xalay u geeriyooday Corona-Virus.
Sida uu bogiisa Twitterka kusoo qoray isbitaalka dowlada ee Oslo universitetssykehus, waxaa xalay isbitaalka Oslo ku geeriyooday qofkii labaad oo Norway u dhinta caabuqa Corona-virus.
Isbitaalka ayaa xaqiijiyay inuu geeriyooday qof waayeel ah oo horey u xanuunsanaa, kaas oo xaaladiisa lagula tacaalayay isbitaalka OUS. Wuxuuna noqon doonaa qofkii labaad ee waayeel ah oo horey u xanuunsanaa oo cudurka u geeriyooday.
Ilaa hada waxaa Norway gudaheeda caabuqa Covid-19 laga helay 1042 qof, kuwaas oo 46 kamid maanta cudurka laga helay.
Halkan ka fiiri sida tirada dadka caabuqa laga helay ay ugu fidsanyihiin Norway: Kommune­oversikt
Xigasho/kilde: Oslo universitetssykehus bekrefter nytt koronadødsfall.
Previous articleErna Solberg oo diyaarisay qofkii badali lahaa, lacala hadii……
Next articleTurkish Airlines oo joojisay duulimaadyada Norway iyo Turkiga.